पाल्पामा बन्याे एकै दिनमा ११८ बेडकाे 'क्वारेन्टाइन' (कहाँ-कहाँ बन्याे ?) - Eranimahal Eranimahal पाल्पामा बन्याे एकै दिनमा ११८ बेडकाे 'क्वारेन्टाइन' (कहाँ-कहाँ बन्याे ?) - Eranimahal
पाल्पामा बन्याे एकै दिनमा ११८ बेडकाे ‘क्वारेन्टाइन’ (कहाँ-कहाँ बन्याे ?)
रानीमहल संवाददाता || १२ चैत्र २०७६,बुधबार १८:५१
पाल्पा – पाल्पामा हालसम्म तिनाउ, तानसेन, रामपुर, माथागढी, रम्भा, बगनासकाली र रिब्दीकोट गाउँपालिकामा क्वारेन्टा्रइनका लागि बेड तयार भएको छ । तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान माविमा १० बेडको क्वारेन्टाइन तयार भएको छ । यस्तै तानसेन नगरपालिका बर्तुङ्स्थित जनप्रिय माविमा १५ बेड तयार भएको छ ।
रामपुरको बालकल्याण प्राविमा २० बेडको क्वारेन्टाइन तयार भएको छ । यस्तै बगनासकालीको चापपानीस्थित चन्द्र माविमा २० बेडको क्वारेन्टाइन बनेको छ । माथागढीको वडा नं. ३ सराईस्थित दिव्यज्योति नमूना माविमा १५ बेडको क्वारेन्टाइन तयार भएको छ । यस्तै रम्भाको ताहुँस्थित रम्भा माविमा ५० बेडको क्वारेन्टाइन तयार भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस्तै रिब्दीकोट गाउँपालिकाको कुसुमखोलास्थित सरस्वती माविमा १८ बेडको क्वारेन्टाइन तयार भएको छ ।
कोरोना भाइरसबाट प्रभावित र संक्रमितको उपचारका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको पाल्पाका स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । पाल्पामा हालसम्म सबै स्थानीय तहमा गरी ११८ बेडको क्वारेन्टाइन बनेको छ । सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले विद्यालयमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरेका छन् । भवन सुरक्षित र आवश्यक जनशक्ति खटाउन समेत सहज हुने भएकाले विद्यालयहरू नै क्वारेन्टाइनका लागि रोजिएको छ ।